पंचायत कालीन अवस्थामा भारतमा राजनिति तिब्र थियो, म १९८८ मै राजनितिमा लागेको थिए :पाण्डे
कक्षा ८ सम्मको यात्रा पार गरेका पाण्डे १९७७ मैं भारत पसेको वताउछन । उनी अर्घाखाँची जिल्लाको केरुंगा गाविस वडा नं. १, बुढारीमा जन्मेको वताउछन । बुबा ओस्तराज पाण्डे र माता तुलसादेवी पाण्डेका दोस्रो सन्तानको रुपमा रहेका उनी, पारीवारिक रुपमा भने बुबाको चौथो सन्तानको रुपमा जन्मिएको, उनले वताए । आफ्नो आमातिरको कुरा गर्दै उनले भने, हामी आठ भाइ–बैनी हौ ।
तर दुवै परिवारको हिसाबले हो भने, हामी जम्मा १६ भाइ–बैनी छौ । दिदिबैनी १० जना रहेको र दाजूभाइ ६ जना रहेको उनले वताए । तिनवटा छोराका बुबा रहेका पाण्डेले छोराहरुको बारेमा जिज्ञासा राख्दा भन्छन, एउटाले एम. ए. फाइनल गर्दैछ । अर्कोले सिए तेस्रो बर्षमा पढ्दैछ । कान्छो भने बल्ल ४ क्लासमा पढ्दैछ ।
५२ बर्षको दौरानमा रहेका पाण्डे नेपाली काँग्रेसको भारतस्थित प्रवासी सँस्था नेपाली जन सम्पर्क समिति, उत्तर भारत क्षेत्रका अध्यक्ष हुन । नेजस बाहिरी दिल्ली शाखा समिति र पन्जाबी बाग शाखा समितका अध्यक्ष हुदै, क्षेत्रीय समितिमा संगठन सचिव, उपाध्यक्ष हुदै अध्यक्षमा निर्वाचित भएका पाण्डेले आफ्नो कार्यकाल सुरु भए लगत्तै नयाँ शाखा समितिहरुको गठन प्रक्रियामा तिव्रता ल्याएका छन ।
उनी सुरुमा प्रवासमा आउदा मुरादावादमा घरमा काम गरेको वताउछन । पछि उनी पन्जाबको संगरुरस्थित बिरला मिलमा गएर काम गरे । त्यहाँ उमेर कम भएका कारण पक्का नहुने चाल पाएपछि १९८१ मा दिल्ली आएको वताउछन, उनी । दिल्लीमा अफिसमा सानै तहमा काम गरेको वताउने पाण्डेले पछि सानो तिनो व्यापार गर्दै अगाडी बढेको वताए ।
पन्चायत कालीन अवस्थामा नेपालमा सबै राजनैतिक पार्टिहरु प्रतिबन्धित थिए । भारतमा भने, त्यसको असर पटक्कै थिएन । यहाँ संगठनात्मक गतिबिधिहरु बडो सरल तरिकाले तिव्र बन्दै थिए । १९८८ मा राजनैतिक चासो बढेको वताउदै उनले भने, अर्घाखाँची पणेनाका राम प्रसाद पोख्रेलहरुले संगठनमा आवद्ध गरेका थिए । २०४६ सालको आन्दोलनपछि राजनैतिक चासो तिव्र भएको उनको दावी छ ।
२०४८ सालको बहुदलीय निर्वाचनपछि ने. का. समर्थक धेरै संघ सँस्था एकिकृत भएपछि आफु निरन्तर नेजसमा कार्यरत रहेको उनले जिकिर गरे । तत्कालीन समयका नेपाली राजदूताबासका प्रमुख र उप–प्रमुखद्वय चक्र वास्तोला र दिनेश भट्टराइहरुको विच संगठन एकिकरण भएको थियो, उनले थपे ।
उनीसँगको सानो कुराकानीको दौरान राखिएको जिज्ञासा, पाण्डेज्यू संगठन गर्दा कहिल्यै नमिठो अनुभव पनि रहयो की ?
सन् २००१ को पुने अधिवेशन जहाँ तपाइ र म केन्द्रिय सदस्यमा जम्मा एक एक मतले पराजित भएका थियौ । आफ्नै मान्छेले धोका दिएका थिए । मेरो जीवनमा सबै भन्दा नमिठो अनुभव नै त्यही नै रही आएको छ, एकातिर भने, अर्कोतिर अहिले केही वर्ष यता नेपालका नेताज्यूहरुलाइ नेजसले अर्थात हामी कार्यकर्ताहरुले जति इज्जत गर्छौ, वहाँहरुले त्यसको कदर नगरेको देख्दा दुःख लाग्छ । वहाँहरु यस्तो संकिर्ण सोंचमा हुनुहुन्छ, की नेजस भारतमा छ वा छैन ? भन्ने पत्तो नभए जस्तो गर्नुहुन्छ । थाह नभएर भने हुदै हैन । जान्दा जान्दै बुझपचाएर हो । यो सरासर गलत हो, र यस्तो गर्नु ठिक हैन । हामी चुनावका बेला जिल्ला–जिल्ला, गाउ–गाउ गएर जुन योगदान दिने गरेका छौ । त्यसको एकरती मूल्यांकन छैन ।
तपाइको अगाडीको राजनैतिक यात्रा कस्तो रहने होला ?
कमसेकम अब दुइ वर्ष यतै बस्नुपर्छ । २ छोराको पढाइ पुरा हुन्छ । त्यसपछि गाउमा गएर गाउलेको सेवा गर्ने हो । गाउ–ठाउमा नेपाली काँग्रेसको बोलवाला बनाउने । समाज सेवा नै महत्वपूर्ण कुरा भएको हुदा नेताहरुसँगको चिनजानलाइ गाउ–ठाउ बनाउनमा सक्रिय रुपमा लाग्ने मन छ ।
राजनिति गर्दा केही अप्ठ्याराहरु झेल्नु पो पर्यो की ?
हैन अनुभवी साथीहरुको सहयोग पाए । काम र अनुभवले गर्दा क्रमिक रुपमा अगाडी बढे । मेरो मूल्यांकन भयो, र मलाइ विश्वास गरेर सबैले जिताउनमा सहयोग गर्नु भयो ।
अन्तमा केही सन्देश दिन चाहानुहुन्छ ? प्रवासी नेपालीहरुलाइ ।
हो नी, पक्कै पनि दिन्छु । प्रवासमा जस्तो सुकै अवस्थामा रहेका नेपालीहरुले संगठनात्मक रुपमा जोडिनु पर्छ । यसले समस्याहरुबाट पार पाउन सजिलो हुन्छ । समस्या भन्ने कुरा पहिले जानकारी भएर आइलाग्ने हैनन् । म धेरै जान्ने सुन्ने छु, भनेर संगठित नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । आउनोस हामी सबै संगठनात्मक रुपमा एक्यबद्ध भएर काम गरौ ।
कृष्ण प्रसाद पाण्डे, भारतबाट नेपाली काँग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि हुन ।
प्रस्तोता : गोबिन्द पोखे्रल, नयाँ दिल्ली–भारत